Ciidamada Badda ee Midowga Yurub oo Badbaadiyay Kaluumeysato Soomaali ah – SBC
Ciidamada Badda ee Midowga Yurub oo Badbaadiyay Kaluumeysato Soomaali ah
Posted by Webmaster on Aktoober 5, 2011 Comments
Warsaxaafadeed ka soo baxay ciidamada badda ee Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in ciidamada ay badbaadiyeen koox kaluumeysto soomaaliyeed ah kuwaasi oo doonidii ay la socdeen ay ku xumaatay biyaha Indian Ocean.
Warka Ciidamada ayaa lagu sheegay in tirade badmaaxiinta la badbaadiyay inay yihiin 5 nin oo dhalashadooda soomaali tahay kuwaasi oo si nabad ah lagu gaarsiiyay Beriga Soomaaliya.
Kaluumeysatadan shanta ah ayaa waxaa ay sabeynayeen biyaha iyaga oo uu ka degay matoorkii doonida ay wateen, kooxdan ma haysan qalab isgaarsiin oo ay kula xiriiri karaan gadiid badeed kale si ay u helaan caawimaad laakiin waxaa badbaadiyay Ciidamada Midowga Yurub.
Doonidan Kaluumeysi oo sabeyneysa Xeebaha Soomaaliya waxaa gacanta ku dhigay Ciidamada Badda eeSpain kuwaasi oo howlgalka EUNAVOR ka mid ah iyo sidoo kale Markab jarmalka laga leeyahay kaasi oo si aad ah ugu dhawaa goobta lagu badbaadiyay
Ciidamada ayaaa kooxdan saran oogada mid ka mid ah MAraakiibtooda oo lagu magacaabo FGS KÖLN kaasi oo lagu siiyay cunto iyo Biyo nadiif ah waxaana ka dib la geeyay meel si aad ah ugu dhaw Dhinaca Beria.
Howlgalka Badbaada ayaa ka mid noqonayo howlgalo faro ku tiris ah oo ay u sameeyaan ciidama Kaluumeystada iyo dadka tahriibka ku gala Xeebaha Soomaaliya ka baxsan ee Bada cas iyo Badweynta Hindiya.
Maxamed Deeq Cabdalla